Haddii aad koorsooyin ka qaadatay kulliyadda bulshada deegaanka, adoo abuuraya bogag internet sanado, ama waa aqoonyahan hiwaayadeed sidaad u socoto, waxaa jira waxyaabo qaar oo naqshadeeye websaydhku iska ilaaliyo hadaayayaayayayayayayay.
Tani waxay macnaheedu tahay goobta uu booqdaha doonayo inuu ku dhajiyo – goob uu ku sii socdo barta shabakada oo ay ku qorantahay and inta badan. Waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo ka dhigaya sameynta bog leh in ay tahay mowduuc boerenkool oo dhan.
1 Xalaal ah # 1: Rinjiyeynta-kleure
2.1 Tusaale Xuubyo Xunqalien: Pine-Sol
6.1 Tusaale Xuubyo Xunka soo baxa: Bermuda-driehoek
7 Xalaal ah # 9: Tipos
Xalaal ah # 1: Rinjiyeynta-kleure
Midabada is aadka u dhalaalaya ee indhahaaga wax u yeera ama midabbada isku dhaca ayaa ka yeeli kara booqdaha soo booqda inay rabaan inay ka cararaan bogga.
Markaad qorshaynayso dulucda websaydhkaaga, iskuday inaad doorato midabyo isugeyn kara midba midka boerenkool. Jaale wuxuu dhif u yahay midab weyn, inkasta oo uu u ekaan karo side lahjad. Adeegsiga midab kasta oo qaansoroobaad ma aha wax fikrad fiican ah labadaba.
Boggani wuxuu isticmaalaa ku dhawaad ​​midab kasta oo la maleyn karo oo ah hababka noocan ah. Habka kaliya ee lagu qeexayo waa nar xun.
Marka labaad, haddii isticmaale uu leeyahay xiriir internet oo gaabis ah, boggu wuxuu qaadan karaa waqti aad u dheer in la xalliyo. 30 ilbidhiqsi kadib, dadka badankood manier bixi doonaan oo waxay u gudbi doonaan goob boerenkool. Waxaan ku nool nahay da ‘ay jiraan wax walboo ay isla markiiba yihiin. Haddii aadan ku soo jiidan dareenka macaamiisha dhowrka ilbiriqsi ee ugu horreeya, waxaad halis ugu jirtaa inaad gebi ahaanba lumiso.
Tusaale Xuubyo Xunqalien: Pine-Sol
Boggan wuxuu leeyahay sawiro badan oo muuqaal ah oo u muuqda inay wali cakiran yihiin. Dusha sare ee sawirada badan, sawirradu waxay ku wareegayaan bogga oo dhan, sidea darteed xitaa haddii booqdaha uu doonayo inuu gujiyo mid ka mid ah sawirrada, waxay ku qasban tahay inay ku dabaasho fargeheeda.
Ku darida waxyaabo badan oo badan, sid fiilada, codka, taararka sawirada sare, ama qoraallada java, ayaa sababi kara in lagu dejiyo gaabis enyo gaabis. Maskaxda ku hooi in inkastoo inta badan dadka soo booqanaya ay yeelan doonaan xawaare sarreeya, haddana waxaa jira macaamiisha baadiyaha ah kuwaas oo ku jiri doona dial-up iyo aan awoodin inay galaan goobtaada haddii ay si aad u ao.
Dhibaatooyin dhawr ah ayaa ka jira garaafyada ku yaal boggan. Marka hore, waxaa jira bas leh cadaan bedelkii asalka hufan ee kaliya lagu daadiyay bogga isla markaana u muuqda mid soo jiidasho leh. Labada sawir ee dhanka midig sidoo boerenkool waa dhibaato maadaama sidii ay u kala dheereysteen oo ay u weynaadeen iyagoon saamiyada la ilaalin. Sawirradihiina manier iska fogeeyeen oo dadka dhinaca midig ku jira ayaa u muuqda kuwa aad u fidsan oo u noqon kara kuwo waaweyn oo ku nool dalka Lilliput.
Haddii webwerf-kaagu u egyahay inaad furantahay Microsoft Word, wuxuu abuuray qayb ka mid ah Fanka Ereyga wuxuuna tuuray bogga internetka, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib uga fekerto waxyaabaha aad naqshadeynayso. Inkasta oo fududaantu tahay gargaar soo dhaweyn ah oo ka socda qaar ka mid ah goobaha bacdamaa, haddii aad aad u yartahay, waxaad halis ugu jirtaa in aad eegto dhallinta yar oo raqiis ah.
Nashqadeeyaha xitaa ma uusan beddelin midabyada ereyada naqshadda caadiga ah ee MS ku bilaabmaysa. Naqshadani manier fududahay si dhakhso ah ayaa loo aqoonsan karaa inay tahay aasaaska nidaamka Microsoft ee aasaasiga ah iyo erayga farshaxanka.
Xitaa haddii degel leeyahay naqshad muuqaal ah oo muuqaal ah, booqdayaashu manier ku jahwareeraan iskana daayaan marinka liita.
Tusaale ahaan, goobo aan lahayn xiriir cad ama waxyaabo badan oo ay adag tahay in go’aan laga gaaro halka ay aadaan. Hal dhibaato oo ay la kulmaan milkiileyaasha websaydhada badan ayaa ah degel yar oo si lama filaan ah u koraya. Jihada ka shaqeysay goorta ay degmadu leedahay shan bog ayaa si fudud u shaqeyn doonin marka goobta ay leedahay 500 bog. Hier is ‘n volledige weergawe van die warshadeyn karo en die loogu die habeyn karo qaybaha en die qeeb hoosaadyada en ay booqdayaashu en die bladsy soos die volgende keer gesien word. Sidoo boerenkool waa caqli badan tahay in lagu daro sanduuqa raadinta.
Booqdaha ayaa rajeynaya jihada la raadin karo ee degaankooda, laakiin halkii ay ku yaalaan daraasado xiriir ah ayaa hoos ku qoran dhinaca bidix ee bogga, xayeysiinta dhinaca midig, iyo ganacsiyo yar yar. Goobtan ayaa laga faa’iideysan karaa dib-u-dhiska qaab-dhismeedka ururka, si ay soo booqdaan si fudud u heli karaan ilaha ay ugaarsadaan.
Naqshadayaasha Webka oo isticmaalaya asalka mashquulka ah iyo ka dibna soo qaado midabka qoraalka ah ee aan bixinin isbeddel ku filan inay ka dhigaan boggooda internetka aan la aqbali karin. Haddii indhaha booqashadu ay waxyeeleyso markaad akhrisato hal maqaal, maxay u sii socon laheyd si aad u akhrido bogag dheeraad ah ee boggaaga? Haddii aad dooratal asal mashquul, ugu yaraan dhig sanduuq, lakab, ama miiska cuntada oo leh asal adag oo dooro midabka qoraalka ee ka soo horjeeda. Isku dag in aad iska ilaaliso cawliga cawliga, laakiin dooro caddaan ah guduud mugdi ah, madow oo casaan ah, iwm.
Ereyada isku dhafan ayaa sidoo boerenkool in la akhriyo side cutubyada kuwaas oo qayb ahaan khafiifinaya garaafyada enyo qayb ahaan asalka adag.
Tusaale Xuubyo Xunka soo baxa: Bermuda-driehoek
Ma aha oo kaliya mawduucyo kala duwan oo ku yaalla meeshan, laakiin qoraalka ayaa ku wareegaya qoraalo boerenkool, taasoo u dhiganta in aan la aqbalin akhriska.
Xalaal ah # 9: Tipos
Wax walbo kuma dhicin wax aan xirfad laheyn oo ka badan kaniisadaha iyo naxwaha. Inkastoo qofna uusan kufiicneyn, waxaad isku dayi kartaa inaad isku soo dhowaato. Weydii saaxiibadaa iyo qoyskaaga inay eched boggagaaga waxayna kaa caawinayaan inaad hesho qaladkan, ama qoro tifaftire xirfad leh si aad u cadeyso bogagaaga. Tusaalahan hoose waa uun xiisaha. Tani maahan shirkad sawir leh oo websaydh ah, laakiin luqad-ku-qabow waxay eegaysaa side ay shirkadaha qaar u muuqdaan.
Websaydhada qaarkood ayaa run ahaantii ah run ahaantii, aad bay u xun yihiin qaabeynta. Websaydhahan si liidata loo qorsheeyay – ma aha hal shey oo ka dhigaya goobta mid xanuun ku ah indahahaaga, laakiin wax kasta oo ku jira barta.
Waxaa jiri kara isku-dar ah midabyo nar xun, marin habaabin iyo waxyaabo boerenkool. Nasiib wanaag, goobahan waa dhif, laakiin daawashada iyaga ayaa kaa caawin kara inaad ogaatid waxa ma inaad sameyso marka aad naqshadeynaysid goobtaada.
Goobtani waa mid naxdin leh oo ay adag tahay in la sharaxo. Marka hore, qof kasta oo u nugul suuxdinta waa inuu ka fogaadaa bartaan, maxaa yeelay waxay u badan tahay inuu ku kiciyo suuxdin xitaa qof aan u suuxsaneyn. Bogagga bogga, waxaa ka buuxa sawirro muuqaal leh oo ifaya. Intaas waxaa dheer, sawirada muuqaallada ayaan raadinayn qaybta ugu badan, iyagoo ku dhammeeya cunug ku jira koox isla markaana ku ciyaaraya gitaarka. Booqo hadaad dareentid.
Haddii aad koorsooyin ka qaadatay kulliyadda bulshada deegaanka，adoo abuuraya bogag internet sanado，ama waa aqoonyahan
Haddii aad koorsooyin ka qaadatay kulliyadda bulshada deegaanka, adoo abuuraya bogag internet sanado, ama
Haddii Adi koorsooyin Ka qaadatay kulliyadda bulshada deegaanka, Adoo abuuraya bogag sanado internet, ama